बढ्दैछ ई-लाइब्रेरीको लोकप्रियता, सामुदायिक विद्यालयमा पनि राख्न जोड - मूल्याङ्कन अनलाइन
भदौ २१, काठमाडौँ । सूचना र प्रविधिको विकाससँगै विद्युतीय पुस्तकालयको लोकप्रियता बढ्दै गएको छ ।
बिना इन्टरनेट पनि पढ्न सकिने सफ्टवेयरको विकास भएकाले परम्परागत पुस्तकालयको विकल्पको रुपमा विद्युतीय पुस्तकालयको प्रयोग बढ्न थालेको हो । पुस्तकको सट्टा पुस्तकालयमा गएर विद्युतीय माध्यम (कम्प्युटर, ल्यापटप र मोबाइल) को प्रयोगबाट पुस्तकलाई पढ्न सकिने प्रणालीलाई नै विद्युतीय पुस्तकालय भनिन्छ ।
कम्प्युटरमा आफैँ कुन किताब पढ्न खोजेको हो त्यो किताबको नाम टाइप गरेर पुस्तक खोजेर पढ्ने व्यवस्था विद्युतीय पुस्तकालयमा रहेको हुन्छ ।
शिक्षा मन्त्रालयका पुस्तकालय शाखा प्रमुख यादव निरौला सूचना र प्रविधिको प्रयोगसँगै विद्युतीय पुस्तकालयको प्रयोग बढेको बताउँछन् । उनले जुनसुकै बेला पनि मोबाइल, ल्यापटप र कम्प्युटरमा पढ्न सकिने भएकोले यसको प्रयोग बढेको बताउँछन् ।
उनले विद्युतीय पुस्तकालयको प्रयोग बढाउन हरेक विद्यालयमा पुस्तकालय स्थापना गर्न मन्त्रालयले प्रोत्साहन गरिरहेको बताए ।
नेपालमा पहिलोपटक साझा शिक्षा ‘ई’ पाटी र नेपाल पुस्तकालय फाउण्डेसनले विद्युतीय पुस्तकालयको अवधारणा ल्याएका हुन् । ई पाटीका टीकाराज कार्कीले विद्यालयस्तरमा विद्युतीय पुस्तकालयको लोकप्रियता बढेको बताउँछन् ।
उनले विद्यालय तह र अन्य पुस्तक हराउने भएकाले डिजिटलाइज गरेर विद्युतीय पुस्तकालय राख्नाले सधैँभरि पढ्न सकिने बताउँछन् ।
वि.सं. २०६६ बाट विद्युतीय पुस्तकालयको शुरुवात गरेको ई–पाटीले अहिले करिब ८ हजार पुस्तक लोकसेवा, कृषि र अन्य व्यक्तिका पुस्तक, १२ हजार शिक्षा/स्वास्थ्यसम्बन्धी र ४ हजार पुस्तकलाई भिडियो बनाएर विद्युतीय पुस्तकालयमा राखेको छ ।
कार्कीका अनुसार ई–पाटीले अहिले देशभरिका करिब ३५० विद्युतीय पुस्तकालय सञ्चालनमा ल्याएको छ, तीमध्ये १५० विद्यालयमा सञ्चालित छन् ।
‘‘एउटा पुस्तक मात्र भएको पुस्तकालयमा धेरैले त्यो पुस्तक पढ्न सम्भव हुँदैन’’ फाउण्डेसनका महासचिव धनकुमार श्रेष्ठ भन्छन्, ‘‘तर विद्युतीय पुस्तकालयमा रहेको पुस्तक जतिजनाले पनि पढ्न सक्दछन् ।
पेनड्राइभ वा कुनै डिभाइसमा राखेर घर लगी कम्प्युटरमा राखेर पनि पढ्न सक्दछन् । अहिले इन्टरनेटबिना नै विद्युतीय पुस्तकालय सञ्चालन हुने भएकाले ग्रामीण क्षेत्रमा पनि यसले सहजै पहुँच बढिरहेको पाइन्छ ।
श्रेष्ठले मुख्यता विद्यालय तहका बालबालिकालाई पढाउनका लागि इ–पुस्तकालयको प्रयोग बढी भएको बताउँछन् । विद्यालयमा मात्र नभएर कलेजमा पनि यसको माग बढेको फाउण्डेसनका महासचिव श्रेष्ठ बताउँछन् ।
फाउण्डेसनमा हाल करिब १० हजार पुस्तक छन् । २२ जिल्लामा १५० सामुदायिक पुस्तकालयमा स्थापना गरेकामध्ये बागलुङको विद्यामन्दिर सामुदायिक पुस्तकालय र उदयपुरको संगम सामुदायिक पुस्तकालय उत्कृष्ट मानिन्छ ।
नेपालमा विद्युतीय पुस्तकालयको थालनी विसं २०६६ मा शुरु भएको मानिन्छ । फाउण्डेसनको सहयोगमा नेपाल शिक्षा ई–पाटीले यसको शुरुवात गरेका हो । अहिले यी दुई संस्थाले छट्टछुट्टै रुपमा विद्युतीय पुस्तकालय बनाउने गरेका छन् । कसैले पुस्तकालय बनाउन आवश्यक भयो भने यी दुई संस्थाले नै पुस्तकालय स्थापना गर्ने गरेका छन् ।
सामान्य पुस्तकालयमा नै विद्युतीय पुस्तकालय स्थापना गरिएको हुन्छ । एउटा पुस्तकालय सञ्चालन गर्नका लागि कम्तीमा ५ लाख चाहिन्छ । ५ वटा कम्प्युटरमा सफ्टवेयर जडान गरे विद्युतीय पुस्तकालय बनाउन सकिन्छ । कम्प्युटरमा सफ्टवेयर हाले पनि विद्युतीय पुस्तकालय सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ ।
यही सामान्य पुस्तकालयमा भने रु. ४१ हजार पर्ने एउटा डिभाइसमार्फत पुस्तकालय सञ्चालन गर्न सकिन्छ । डिभाइसमा विद्युतीय पुस्तकालयमा आवश्यक पुस्तकलाई डिजाटाइज गरिएको हुन्छ । र पुस्तकालयमा रहेका कम्प्युटर, मोबाइलबाट पुस्तक पढ्न सकिन्छ ।
« उपप्रधानमन्त्री महरा बेइजिङ प्रस्थान (Previous News)
(Next News) चाडपर्वलाई लक्षित गरी महानगरीय प्रहरीले ‘यात्रु सहायता कक्ष’ सञ्चालन गर्ने »